သင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ ကြော်ငြာ တွဲရိုက်ခဲ့တာကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ အပေါ် ပြန်လည် ရှင်းပြလာတဲ့ ဖိုးချစ် – Let Pan Daily
ပရိသတ် အချစ်တော် ဇာတ်မင်းသားလေး ဖိုးချစ်ကတော့ ဇာတ်သဘင်လောက မှာ မသိသူ မရှိလောက်အောင် သဘင်လောကသားတွေကို ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်ပေး နေတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပါ ။ ဖိုးချစ်ကတော့ ယခုရက်ပိုင်း မှာ သင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ အတူတူ ဇော်ဂျီစိန် ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းဆေး ကြော်ငြာ ရိုက်ကူးခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ အနုပညာနယ်ပယ် မတူကြတာကြောင့် ပရိသတ်တွေ ဝေဖန်လာမှာကိုလည်း သိတယ်လို့ မီဒီယာတွေကနေတဆင့် ဖိုးချစ်က အခုလို ပြောပြလာပါတယ်။
ဖိုးချစ်က. ” “ ကျွန်တော် နဲ့ ညီမ နဲ့က ရိုက်ကူးရေးတွေမှာ အများကြီး မဆုံဖူးပါဘူး။ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက်ကတော့ ခင်ခင်မင်မင် ရှိပါတယ်။ ပြောလာကြမှာ တွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ အဖက်ဖက်က သက်သက်စီဖြစ်နေကြတာလေ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် အလုပ် ကျွန်တော် လုပ်ပါတယ်။ ကြော်ငြာထွက်လာရင်လည်း ဖန်တီးထားတဲ့ Creation က ဘယ်လို အကောင်းဆုံး ဖန်တီးထားသလဲ ဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ” လို့ ပြောလာခဲ့တာပါ
ဆက်လက်ပြီး ဖိုးချစ်က သူ့ရဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့ ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့ပုံကိုလည်း ” သင်ဇာဝင့်ကျော်က သူ့အလုပ် ကို သူသေချာလုပ်တယ်။ အချိန်တိတိကျကျနဲ့ ကြိုးစားတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ပဲ သူတာဝန်ယူရမယ့် အပိုင်းကို တာဝန်ကျေအောင် လုပ်နိုင်တယ်။ လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြိုးစားတာ မြင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဖိုးချစ်သည် ဇော်ဂျီအဝတ်အစား နဲ့ရိုက်တယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်သည် သူယောင်မယ် ပုံစံနဲ့ ရိုက်တယ်။ ကြော်ငြာထွက်လာရင်လည်း ပရိသတ်တွေ ပြောကြတာကို ကျွန်တော် ကြားချင်ပါတယ်” လို့ ရှင်းပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသားချော ဖိုးချစ်ကတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့ကြော်ငြာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အပေါ် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေရှိလာခဲ့တာကြောင့် ပြန်လည်ရှင်းပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် လူမှုကွန်ယက်မှာ နာမည်ကြီးနေတာဖြစ်တာကြောင့် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်
သငျဇာဝငျ့ကြျော နဲ့ ကွျောငွာ တှဲရိုကျခဲ့တာကွောငျ့ ဝဖေနျခံနရေတဲ့ အပျေါ ပွနျလညျ ရှငျးပွလာတဲ့ ဖိုးခဈြ
ပရိသတျ အခဈြတျော ဇာတျမငျးသားလေး ဖိုးခဈြကတော့ ဇာတျသဘငျလောက မှာ မသိသူ မရှိလောကျအောငျ သဘငျလောကသားတှကေို ကွညျ့ရှု စောငျ့ရှောကျပေး နတေဲ့ အနုပညာရှငျ တဈယောကျပါ ။ ဖိုးခဈြကတော့ ယခုရကျပိုငျး မှာ သငျဇာဝငျ့ကြျော နဲ့ အတူတူ ဇျောဂြီစိနျ ဆိုတဲ့ တိုငျးရငျးဆေး ကွျောငွာ ရိုကျကူးခဲ့တာ တှရေ့ပါတယျ။ အနုပညာနယျပယျ မတူကွတာကွောငျ့ ပရိသတျတှေ ဝဖေနျလာမှာကိုလညျး သိတယျလို့ မီဒီယာတှကေနတေဆငျ့ ဖိုးခဈြက အခုလို ပွောပွလာပါတယျ။
ဖိုးခဈြက. ” “ ကြှနျတျော နဲ့ ညီမ နဲ့က ရိုကျကူးရေးတှမှော အမြားကွီး မဆုံဖူးပါဘူး။ တဈယောကျ နဲ့ တဈယောကျကတော့ ခငျခငျမငျမငျ ရှိပါတယျ။ ပွောလာကွမှာ တှကေတော့ အမြားကွီးပါပဲ။ အဖကျဖကျက သကျသကျစီဖွဈနကွေတာလေ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော့ အလုပျ ကြှနျတျော လုပျပါတယျ။ ကွျောငွာထှကျလာရငျလညျး ဖနျတီးထားတဲ့ Creation က ဘယျလို အကောငျးဆုံး ဖနျတီးထားသလဲ ဆိုတာ တှရေ့မှာပါ” လို့ ပွောလာခဲ့တာပါ
ဆကျလကျပွီး ဖိုးခဈြက သူ့ရဲ့ သငျဇာဝငျ့ကြျောနဲ့ ရိုကျကူးဖွဈခဲ့ပုံကိုလညျး ” သငျဇာဝငျ့ကြျောက သူ့အလုပျ ကို သူသခြောလုပျတယျ။ အခြိနျတိတိကကြနြဲ့ ကွိုးစားတယျ။ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ရငျးရငျးနှီးနှီးနဲ့ပဲ သူတာဝနျယူရမယျ့ အပိုငျးကို တာဝနျကအြေောငျ လုပျနိုငျတယျ။ လူငယျတဈယောကျအနနေဲ့ ကွိုးစားတာ မွငျပါတယျ။ ကြှနျတျော ဖိုးခဈြသညျ ဇျောဂြီအဝတျအစား နဲ့ရိုကျတယျ။ သငျဇာဝငျ့ကြျောသညျ သူယောငျမယျ ပုံစံနဲ့ ရိုကျတယျ။ ကွျောငွာထှကျလာရငျလညျး ပရိသတျတှေ ပွောကွတာကို ကြှနျတျော ကွားခငျြပါတယျ” လို့ ရှငျးပွသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ မငျးသားခြော ဖိုးခဈြကတော့ သငျဇာဝငျ့ကြျောနဲ့ကွျောငွာရိုကျကူးခဲ့တဲ့ အပျေါ ပရိသတျတှေ ရဲ့ ဝဖေနျမှုတှရှေိလာခဲ့တာကွောငျ့ ပွနျလညျရှငျးပွလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော လူမှုကှနျယကျမှာ နာမညျကွီးနတောဖွဈတာကွောငျ့ တငျဆကျပေးလိုကျရပါတယျနျော
ရမှေနျ ကှယျလှနျသှားခဲ့တာ (၆)လပွညျ့တဲ့နမှေ့ာ ထူးဆနျးတဲ့ အိမျမကျမကျခဲ့တဲ့အကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ ရမှေနျရဲ့မိခငျ